Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo Maanta Saxiixay Sharciga Muranka Dhaliyay ee Ammanka Dalka – Radio Muqdisho
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta qalinka ku duugay oo saxiixay sharciga cusub ee ammaanka Kenya,kaasoo isibedel lagu sameeyay sanadkan 2014-ka.
Sharcigan cusub ee ammaanka dalka Kenya ayaa waxaa arragtiyo kala duwan ay ka muujiyeen dadka Kenyanka ah iyo ururada bulshada rayidka ah ee dalka.
Madaxweynaha ayaa markii uu saxiixay Sharcigaasi muranka dhaliyay waxa uu warbaahinta u sheegay in sharcigaan uusan ku xad-gudbeyn Xaquuqda Aadanaha ama Dastuurka u yaallo Kenya, balse loogu talo galay in lagu adkeyo ammaanka dadka Kenyanka ah, gaar ahaan in looga hor-taga falalka aragagaxisada iyo noocyada kale ee dambiyada ah ee ka dhaca dalka.
“Dhammaan shacabka ka walaacsan sharcigan ee Kenyanka ah iyo kuwa daneeyo arrimaha Kenya-ba waxaan u sheegayaa; in sameyn uunan ku yeelan doonin sharcigaan ay ansixiyeen Baarlamaanka ee la xiriiro ammaanka,” ayuu yiri Madaxweyne Uhuru.
Madaxweyne Uhuru ayaa ugu baaqay shacabka Kenya in ay waqti ku bixiyaan oo ay akhriyaan sharcigaan cusub oo uu shalay meel mariyay baarlamaanka dalka Kenya.
“ujeeddada ugu weyn ee sharcigaan laga doonaayo waxey tahay oo kaliya in lagu ilaaliyo nolosha iyo hantida dhamaan muwaadiniinta Kenyaanka ah”Ayuu sii raaciyay madaxweynaha.
Madaxweyne Uhuru ayaa uga mahad ceiyay baarlamaanka ansaxinta sharciga ammaanka dalka oo is-bedel lagu sameeyay.
Sharcigan cusub ee ammaanka dalka Kenya oo uu soo diyaariyeen Gudi-hoosaadka amniga ee Baarlamaanka Kenya ayaa shalay lagu meel mariyay kulankii Baarlamaanka,kaasi oo uu buuq hareeyay.
Sharcigan cusub ee ammaanka dalka Kenya oo uu maanta sixiixay Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa si cad uga soo horjeestay xisbiga mucaaradka dalka Kenya ee CORD, Qaar ka mid ah Hogaamiyaasha Muslimiinta iyo Ururrada Bulshada rayidka ah.iyadoo sidoo kale ay dhaleeceeyay sharcigan cusub Hay’adaha Xaquuqul Aadanaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International.